Meksika: Mamaly Ilay Fisantarana ”Faran’ny Herinandro Mahafinaritra” Ny Mpampiasa Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Aogositra 2017 5:00 GMT
Tamin'ny 9 Novambra 2011, nambaran'ny Filoha Meksikàna Felipe Calderón ny fametrahana ilay fisantarana ”Faran'ny Herinandro Mahafinaritra : ) (ny herinandro mora indrindra ao anatin'ny taona)” (El Buen Fin) [es], izay hiseho eo anelanelan'ny 18-21 Novambra 2011, ary antenaina ho azo averina isantaona.
Araka ny vaovao ofisialy [es], mifototra amin'ny fampiharana fampihenam-bidy any amin'ny toeram-pivarotana isan-karazany ity ”Faran'ny Herinandro Mahafinaritra” ity ary koa amin'ny fandrosoana mialoha ny tombonkaraman'ireo mpiasam-panjakana. Araka io loharano ofisialy io, avy amin'ny sehatra tsy miankina ny hevitra ary hampiroborobo ny fiadanan'ny fianakaviana, ary koa hanamafy ny sehatra ara-toekarena rehetra, amin'ny famoronana asa bebe kokoa sy fitomboana ara-toekarena ho an'ny firenena.
Niteraka fanehoankevitra maro samihafa teny anivon'ireo blaogera sy mpampiasa tambajotra sosialy ao Meksika ny fanambaran'i Felipe Calderón. Milaza i Diego avy amin'ny blaogy Blog de Blogs [es] fa misy fitoviana kely sasantsasany amin'ilay Zoma Maizina (nampidirina tao Etazonia iray andro aorian'ny Thanksgiving). Manahy ihany koa izy ny amin'ny mety hametrahan'ireo mpandraharaha fihenam-bidy mahomby ary mametra-panonantiana mikasika ny fotoana isehoan'ilay hetsika fisantarana:
Nanolotra ilay hetsika fisantarana ”Faran'ny Herinandro Mahafinaritra” ny Filoha Felipe Calderón androany izay dika Meksikàna an'ilay Zoma Maizina, ilay andro anomezan'ny toeram-pivarotana any Etazonia fihenam-bidy lehibe ny andro aorian'ny Thanksgiving.
Toa hoe milaza izy fa miombon-kevitra amin'ireo fikambanana ara-barotra sy fikambanana sampandraharaha ry zareo ka hanome, manomboka ny 18 ka hatramin'ny 21 Novambra, ny vidy sy ny taha ambany indrindra ao anatin'ny taona.
Ho hitantsika eo raha toa ka manaraka ny hetsika ataon'ny Filoha ireo toeram-pivarotana Meksikàna, satria mety hampiaka-bidy izy ireo ny andro mialoha noho izany miaraka amin'ireo fampihenana goavambe ataony mandritra ny faran'ny herinandro dia mitovy ihany ny vola alohantsika.
Natao hahasoa ny mpivarotra sy ny mpanjifa ilay hevitra.
Querétaro, Meksika. Sary avy amin'ny mpampiasa Flickr broc7 nampiasàna lisansa Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)
Mandritra izany fotoana izany, Eduardo S. H. ao amin'ny El Gerundio del Ocio [es], miaraka amin'ny feo feno fanantenana kokoa, dia maminavina ny vokatra mety hisy amin'ny fametrahana ity hetsika fisantarana ity:
Mahaliana tokoa ilay hetsika fisantarana, na ho an'ny mpanjifa sy mpiasa na ho an'ny fanjakana. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mety hanome tosika ny toekarena isan-tokantrano ary hanampy ireo mpandraharaha hampihena (na mba farahafaratsiny tsy mampihetsika) ny tahàn'ny tsy fananana asa aty Meksika. Na tsy miombon-kevitra amin'ny fampiroboroboana fanjifàna aza aho, heveriko fa ny hetsika toy ny Faran'ny Herinandro Mahafinaritra, raha toa ka natao tsara tamin'ny tokony ho izy, dia mety hitondra tombony kely sasantsany ho an'ny firenena. Raha ny marina dia efa mpanjifà avokoa isika, ny hany ilaintsika mba hahatratrarana ny haavon'ny adalan'ny Etazonia dia ny fahefà-mividy bebe kokoa.
Nohararaorin’ i Bombusterrestris1 avy amin'ny La Trapaleta [es] ilay fotoana mba hanomezana soso-kevitra sasantsany ho an'ireo mpamaky hanaovany fiantsenàna tsaratsara kokoa.
Ampitahao ny vidy, aza mety entanin'ny fihetsehampo, mametraha laharam-pahamehana toy ny fandoavana ny karabola, manangona vola, ary tsy ilaina mividy zavatra mihoatra noho izay azonao vidiana na inona na inona toe-javatra iainana, satria mampikorontana ny karama amin'ny taona manaraka izany
Ao amin'ny Twitter, mametraka fanontaniana mikasika ny maha-zava-dehibe ilay hetsika fisantarana manohintohina ny kolotsaina izay mamporisika fanangonam-bola i Celiaalviso (@Celiaalviso)
Fa maninona ny Fanjakana Federaly, raha tokony hanamafy ny kolotsaina fanangonana, no mikarakara ”fampihenam-bidy lehibe any amin'ireo toerampîvarotana eto amin'ny firenena”? #BuenFin [#Faran'nyHerinandroMahafinaritra]
Nanenina ny tsy naha-mpiasam-panjakana azy sy ny tsy hahazoany tombony amin'ilay ”fandrosoana mialoha” ny tombonkarama mba hanararaotana ireo fihenambidy ireo mpampiasa hafa toa an'i Gerson Obrajero (@tlalocman):
Mikasa ny hividy zavatra aho amin'ny #BuenFin. Indrisy anefa fa tsy mpiasam-panjakana mba hahazoako ny tombon-karamako amin'ny Novambra!
Naneho hevitra mikasika ny tena mety ho ”faran'ny herinandro mahafinaritra” aminy i Kid Buda (@kidbuda) :
Tsy haiko… antsoy hoe hippie na kaominista aho, fa ny #BuenFin milay, raha ny tena izy, dia faran'ny herinandro feno fahatsaran-tsitrapo, fahalalahan-tanana…
Etsy ankilany, raha sady tsy manala ny maso amin'ny toetry ny tsy fahandriampahalemana ao Meksika amin'izao fotoana izao , dia nilaza ity manaraka ity i Hugo Cedeño Tenorio (@sonidototal) mikasika ilay hetsika nambarain'ny Filoha:
Manantena fotsiny aho mba tsy ho lasa ny herinandro feno herisetra indrindra an'ny fitondram-panjakana ilay antsoina loatra hoe #buenfin.
Toy ny hita eto, maro ary mahaliana ny fanehoankevitr'ireo Meksikana mikasika ity hetsika fisantarana ity, na mila miandry ireo andro farany amin'ny volana aza isika vao hahita raha toa ka tontosa tsara ny tanjona amin'ny ”Faran'ny Herinandro Mahafinaritra”.
Farany, tokony marihana fa tsy hitranga amin'ny fotoanan'ny Zoma Maizina ny ”Faran'ny Herinandro Mahafinaritra”, farafaharatsiny tsy amin'ity taona ity, satria ny Thanksgiving 2011 dia hankalazaina any Etazonia amin'ny Alakamisy fahefatra amin'ny volana Novambra, herinandro iray aorian'ny fiandohan'ny ” Faran'ny Herinandro Mahafinaritra” aty Meksika.